Guddoomiyaha Baanka Somaliya Oo Beeniyay Inay Dawladiisu Ingiriiska Ka Codsatay Inaan Dalkiisa Lagu Daabicin Lacagta Somaliland | Salaan Media
Home Wararka Guddoomiyaha Baanka Somaliya Oo Beeniyay Inay Dawladiisu Ingiriiska Ka Codsatay Inaan Dalkiisa...
Guddoomiyaha Baanka Somaliya Oo Beeniyay Inay Dawladiisu Ingiriiska Ka Codsatay Inaan Dalkiisa Lagu Daabicin Lacagta Somaliland
Aug 1, 2-13 Hargeysa(SM) – Guddoomiyaha Baanka Somaliya Dr. Cabdisalaan Cumar Hadliye, ayaa si kulul u beeniyay warar ay warbaahinta Somalida qaar ka mid ah maalmihii u dambeeyay baahinayeen, kuwaas oo sheegayay inay dawladoodu ka dalbatay dawladda Ingiriiska inay joojiso daabicista lacagta shillinka Somaliland.
Warkan oo si weyn u baahay ayaa xataa ay dad ajaanib ahi ku falanqaynayeen bogaga Internetka ee ay bulshadu xogaha isku dhaafsato sida twitterka. Hase yeeshe guddoomiye Hadliye, oo isagoo jooga magaalada Muqdisho ee dalka Somaliya, xalay telefoonka ugu waramay Wargeyska Geeska Afrika, ayaa beeniyay jiritaanka warkaas, waxaanu sheegay inay Somaliland xaq u leedahay inay lacagteeda daabacato. “Warkaas aad I weydiisay gebi ahaanba waa been abuur oo maaha mid ay wax ka jiraan.” Ayuu yidhi Guddoomiyaha Baanka Somaliya oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Somaliland.
Guddoomiyaha waxa uu Geeska Afrikasu’aalay bal in isaga ka sakow uu warkan ka maqlay madaxda wasaaradda maaliyadda Somaliya amaba cid kale, waxaanu Mr. Hadliye yidhi, “Waa been abuur boqol kiiba boqol (100%), aanay waxba ka jirin. Somalilandna xaq ayay u leedahay inay lacagteeda daabacato,kolayba anigoo gudoomiyahii baanka ah Cabdisalaan ahaan waligay arinkaas samayn maayo. Cid I waydiisay iyo cid ka hadlaysana maan arkin mana jirto sabab loo joojiyo waxay Somaliland rabto.”
Wuxuu hadalkiisa ku soo gunaanaday, “Somalilandna anigaa ka imid oo kama soo hor jeedo.”
Warkan uu guddoomiyaha Baanka Somaliya baahiyay ayaa meesha ka saaraya jiritaanka warkaas sheegayay inay dawladda Somaliya ay ka codsatay dawladda Ingiriiska inaan dalkeeda lagu daabicinta lacagta shillinka Somaliland